Ciidamada xoogga dalka oo deegaanno hor leh kala wareegay Al-Shabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada xoogga dalka oo deegaanno hor leh kala wareegay Al-Shabaab
Ciidamada xoogga dalka ayaa maanta howgallo ay ka sameeyeen degaanno hoos yimaada degmada Ceel buur kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab ayna ku dileen 7 ka tirsan Shabaab, iyagoo iminka ku guda jira howlgallo lagu xaqiijiyo amniga.
Guddoomiyaha degmada Ceelbuur Xasan Xuseen Guutaale oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada ay howlgalka ku dileen toddobo ka tirsanaa Al-Shabaab, ayna kula wareegeen deegaanno hor leh oo ay Shabaabku dadka ku dhibaateyn jireen.
Guddoomiyaha ayaa tilmaamay in ciidamada ay sii joogteynayaan howlgallada ka dhanka ah ee lagu baacsanayo haraadiga Al-Shabaab, isagoo intaa ku daray inay jiraan dad rayid ah oo ay Shabaabku qafaasheen, kuwaasi oo qaarkood ay ciidanka si xoog ah uga soo furteen, isagoo intaa ku daray in ciidamadu ay howlgallo amni xaqiijin ah ka wadaan deegaannada Jacar iyo kuwa kale oo laga eryay Shabaab.
Ciidamada xoogga dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waday howlgallo ka dhan ah haraadiga Al-Shabaab ee ku dhuumaaleysanaya deegaanno ka mid ah gobolka galgaduud.
DEG DEG: M/weynayaasha Jubbaland, Puntland & Ra’iisulwasaare Sharmaake oo goordhow shir u dhamaaday